CHAMPIONS LEAGUE (Group B): Benfica iyo Besiktas oo isku garab dhacay iyo Napoli oo guul ka gaartay Dynamo Kyiv…+SAWIRRO – Gool FM
CHAMPIONS LEAGUE (Group B): Benfica iyo Besiktas oo isku garab dhacay iyo Napoli oo guul ka gaartay Dynamo Kyiv…+SAWIRRO
Byare September 14, 2016
(Europe) 14 Sebt 2016. Group-ka B ee Champions League Benfica ayaa bar-baro la gashay Besiktas halka kooxda reer Talyaani ee Napoli ay guul ka gaartay Dynamo Kyiv.
Ciyaarta Napoli iyo Dynamo Kyiv ayaa ku idlaatay 2-1 iyadoo goolasha la iska wada dhaliyay qeybta hore ee ciyaarta.
Dynamo ayaa hogaanka qabatay daqiiqadii 26-aad waxaana goolka u dhaliyay Denis Garmash, dhaliyaha cusub ee Napoli Arkadiusz Milik ayaa madax ugu bar-bareeyay ka hor inta uusan isla isaga hogaanka madax kale ugu dhiibin kooxdiisa daqiiqadii 45-aad.
Dhanka kale naadiga Benfica ayaa bar-baro 1-1 la dhaafi waysay kooxda reer turki ee Besiktas.
Qeybtii hore ayaa lagu kala nastay 1-0 oo ay ku hogaamineyso Benfica oo waxaa goolka u dhaliyay Franco Cervi daqiiqadii 12-aad, balse dhammaadka ciyaarta ayaa waxaa Besiktas free kick ugu bar-bareeyay Anderson Talisca.
Pepe; "Waxaan doonayaa inaan ciyaarahayga ku dhameysto Real Madrid"
Luis Enrique oo ammaan ugu qubeeyay Lionel Messi kaddib RIKOODHKII uu xalay ka dhigay Champions League